Igbo, Tracts, UZI NKE 08 -- Ònye bụ Kraịst? | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 08 (The LORD comforts you!)
UZI NKE 8 - Ònye bụ Kraịst?
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe dị iche iche na-egosipụta ozizi ha na akụkọ ndụ nke ndị guzobere ha site na akwụkwọ na Intanet, na-agbalị ịkọwa ụkpụrụ ha na-egbukepụ egbukepụ na mgbasa ozi na-akpali akpali.
Nwa nke Meri guzoro nwayọ n'agbata okwu nduzi a. Ọ na-ewepụta Onwe Ya nye onye ọ bụla chọrọ ịmara Ya. Aha ahu bu "Kraist" di ugbua na iri abuo na ise (569) na agba ohu. Nwa nke Meri n'onwe ya gosipụtara na Onye nwe ya na-asị: "Mmụọ nke Jehova dị n'ahụ m, n'ihi na O tere m mmanụ ikwusa ozioma nye ndị ogbenye; O zitewo m ịgwọ ndị obi ha tiwara etiwa, ikwusa nnwere onwe nye ndị ahụ a dọtara n'agha na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ịtọhapụ ndị a na-emegbu; ikwusa afọ a na-anara nke ọma nke Onyenwe anyị." (Luk 4:18-19)
Kraịst, Onye E Tere Mmanụ, kpughere ihe nzuzo Ya site n'ikwu okwu ahụ dị n'elu nke e kpugheere Aịsaịa onye amụma afọ 700 tupu a mụọ Kraist (Aịsaịa 61:1-2).
Amuru Meri site na Mo nke Jehova. Tụkwasị na nke ahụ, Chineke zitere oke nke Mmụọ Nsọ ya n'elu Kraịst ka O wee nwee ike ịrụ ọrụ zuru oke na Ya ma mezuo uche Chineke. Ọ na-ebi ndụ n'enweghị mmehie, dị ọcha na nsọ.
Kraist gbara akaebe na Ya onwe ya bu "Onye ejiji Mo Nso nke Jehova". Na agba ochie, ndi eze, ndi isi nchu aja na ndi amuma ji mmanu di nsọ tee manu dika ihe ngbawa nke ike na amamihe nke Chineke iji mezuo olu ha. Ihe omuma a nke igbado mmanu di otua nime agba ochie bu onyinyo nke ihe ekpughere nime Kraist. E tere ya mmanụ site na Mmụọ Nsọ iji mezuo ọrụ niile Ya buru n'amụma dị ka Eze ebighi ebi (Daniel 7:13-14), Nnukwu Onye Nchụàjà (Abụ Ọma 110:4), Onye Amụma ahụ e kwere ná nkwa (Deuterọnọmi 18:15), Onye Nkwado maka ndi nmehie (Aisaia 53), na okwu nke Chineke (Olu 61:1-2). Aha ahu bu "Kraist" abughi aha nwa nke Meri, ma kowaputa oru ya, nke Chineke doziri ma họputa ya.
N'ihi gịnị ka e ji ziga Kraịst?
Onye okike zitere Kraist ma nye Ya Mmụọ Nsọ iji kwusara ndị ogbenye, na inye ha ozi ọma nke mgbapụta, na a ga-anapụta ha n'iwe Chineke ma bụrụ ndị ezi omume na ụbọchị ikpé.
Chineke achọghị ndị ukwu, ndị bara ọgaranya, ndị amamihe, ndị ọkà mmụta ma ọ bụ ndị a ma ama, ma buru ụzọ hụ ịhụnanya na ọmịiko n'ebe ụmụntakịrị nọ, ndị na-enweghị mmeri, ndị mmehie, ndị na-adịghị ike, ndị ogbenye na ndị chọrọ enyemaka. Onye Pụrụ Ime Ihe Nile zigara Kraịst Ya e tere mmanụ nye ndị dara ogbenye na ndị a chụpụrụ achụpụ inye ha olileanya, ike ime mmụọ na ndụ ebighị ebi site na ịnata Mmụọ Nsọ site n'aka Ya.
Kraist kpọrọ ozi ya "ozioma" - ozi oma di nma. Ọ bụ ozi nke na-eweta onye ọbụla na-ekwere na Ya n'ime ezinụlọ nke Chineke, na-enye ha ụlọ n'eluigwe. Oziọma ahụ na-emeri ịkpọasị ụwa. Okwu nke Kraist napufu okwu ugha, ugha, na nduhie ma merie idi ocha na iko. Mmụọ nke Chineke na-ebi n'ime ndị nụ na ịnakwere Oziọma ahụ ma nọgide n'ozi Ya. Oziọma bụ onyinye Chineke nye gị! Onye na - agụghị ma ọ bụ ịnakwere onyinye a pụrụ iche nke Kraịst nyere nọgidere bụrụ onye dara ogbenye, n'enweghị olileanya, ọ dịkwa nso na mmekọrịta ya na Chineke dị ndụ.
Kraist kwuputara na Chineke ziteere ya ndi obi gbawara n'ihi nchegbu ha na nmehie ha. Kraist na-anapụta ndị ejiri mmehie ha dị n'okpuru ikike nke Setan. Ọ na-akpọlite ndị mmehie bụ ndị nwụrụ n'ụzọ ime mmụọ ma na-enye ndụ ha n'adịghị ọcha na izi ezi. Kraist abughi ihe efu efu, ma biri ihe O kwuru. Onye ọ bụla gụrụ ọrụ ebube Ya na Oziọma na nke kor'an, nwere ike ịmata na Ọkpara Mary bụ ezi Kraịst ahụ, onye e ji ike nke ịhụnanya Chineke tee mmanụ. Ọ nwụghị n'ili - Ọ dị ndụ. Ọ gbara ndị na-eso ụzọ Ya ume na ike ime mmụọ Ya ga-emezu n'ime ha.
Ị na-ete Mmụọ Nsọ Mmụọ Nsọ?
Kraịst abụghị ịchọ ọdịmma onwe ya nanị. O debeghi mmanu nke Mmo Nso na ike Ya nke Chineke nye Onwe Ya. O nyere mmo Nso nye ndi náadighi iwe nke cho ro udo nke Chineke nime obi ha, ka ha wee were Mmo nke amara me kwa kao juputa naih n'anya nke Chineke. Jụọ onwe gị, sị, "M kwesịrị ịnọgide na-adịghị ọcha nke mmehie m jikọtara? Ma obu ka m choro idi ka ndi di ọcha na ndi ezi omume site na Kraist ma were ya na mmuo Ya nso?". O kwuru, sị,
"Onye na-abịakwute M, agaghị m achụpụ ya ma ọlị" (Jọn 6:37);
"Onye na - ekwere na Mụ nwere ndụ ebighị ebi" (Jọn 6:35,47; 8:12; 10:27-28; 11:25-26); ma
"Onye na-atụkwasị M obi, M na-ebi n'ime ya".
Ọ bụrụ na ị ghọtara omimi nke nkwa ndị a Chineke, meghee obi gị nye Kraịst, Onye E Tere Mmanụ, ka O wee were Mmụọ Nsọ Ya tee gị mmanụ.
Kraist kwuputara ihe nzuzo nke mmanu Chineke a: nbia Ya iji weta obia nke anata nke Onyenwe anyi. Na Shari'a nke Moses, anyị na-agụ na mgbe afọ iri ise gasịrị, a ghaghị ịtọhapụ ndị ohu niile ma ihe onwunwe ha kwesịrị ịlagha chikwute ha (Levitikọs 25:10).
Nke a bụ ihe ịrịba ama maka nnapụta ime mmụọ ka ukwuu. Kraist choro igbaputa ndi ohu nke nmehie site na njo ha na nmebi iwu ha iji weghachi ha nye Chineke onye n'echere ha. Kraist nwere ikike na ikike nke nzoputa a, n'ihi ekele nke mgbaputa maka mmehie anyi. Na mb͕e gara aga, Chineke nyere iwu site n'aka Moses, ma amara na ezi-okwu sitere n'aka Jizos Kraist puta (Jọn 1:17). Mgbe Kraist kpuchiri mmehie nke ụwa, onye ọ bụla nwere ike ichighar ịkwuru Chineke n'enweghị ihe mgbochi ma ọ bụ igbochi. Onye obula nke chighariri na Kraist g'awe icha otite na Mo Nso ya dika nkwa nke ihe nketa nke ala eze Chineke. Ha agagh ahuta Chineke dika Onye ikpe ebighi ebi na ikpé. Ọ ga-apụta n'ihu ha dị ka Nna na-eme ebere na-eche ha ma na-enweta ọṅụ na ọṅụ.
Amata m Kraịst
M biri dị ka onye mkpọrọ nke mmehie na ohu na-enwe obi ụtọ nke uche m. M na-achọ ihe ọ bụla ga-egbochi m mkpa anụ ahụ, nye m nkasi obi na obi ụtọ ma mejupụta obi m n'ịhụnanya, mana ọ dịghị uru. Enwetara m oge ọṅụ na oge obi ụtọ, mana oge dị ụtọ ga-apụ n'oge na-adịghị anya, mmetụta nke enweghị ntụpọ ga-alọghachi. Anọgidere m na ụzọ ndụ a ruo mgbe m nụrụ banyere Jizọs Kraịst, Onye Nzọpụta bụ onye napụtara ndị nsogbu. Amalitere m ịchọ Ya, otu enyi m gwakwara m banyere ọrụ nke Ọkpara Meri mere maka ọdịmma mmadụ. Ọ gwara m banyere otú Jizọs nwere ike isi gbanwee ndụ m.
Kraist nwụrụ maka m inye m ndu ebighi ebi ka m wee nwee ndụ ndụ ebighị ebi na obi ụtọ. Ma ka m wee nweta obi ụtọ, amatara m na aghaghị m ido Ya n'okpuru Ya ka m wee nwee ike jupụta ịhụnanya na ọṅụ. Mgbe ahụ, ekpebiri m ikpe ekpere ma rịọ Kraịst, nwa Meri, ịbanye ma wepụ ndụ m. O banyere n'ezie wee malite ọrụ nzọpụta ya n'ime m. Ugbu a, ana m ebi ndụ na ọṅụ na obi ụtọ ebighi ebi. Enweghị m ụjọ ma ọ bụ na-echegbu onwe m, n'agbanyeghị mkpagbu, n'ihi na Ọ na-eche banyere m ma na-egbo mkpa m. M na-akpọ gị òkù, onye ị hụrụ n'anya, ka i mee nzọụkwụ a ma rịọ Kraịst ka o tinye n'obi gị ka i wee nwee ndụ nke ọṅụ ebighị ebi na udo n'etiti nsogbu niile gbara gị gburugburu.
Prayer Most gracious and merciful God, You are the spiritual Father to all who repent. We thank you for sending Christ, the Anointed One, into our impure world. We are not worthy to come near to Christ or to receive Your pure Spirit, for we are all sinners. Yet, You bless the poor in spirit. You accepted Christ’s atonement; therefore, I worship You and ask You to anoint me also with Your Holy Spirit that I may be changed and become humble, pure, eternal, merciful, holy and full of love as Christ is. Amen.
Chineke amara na obi ebere, I bu Nna ime mmuo nye ndi nile cheghariri. Anyị na-ekele gị maka iziga Kraịst, Onye E Tere Mmanụ, n'ime ụwa anyị na-adịghị ọcha. Anyị erughị eru ịbịaru Kraist nso ma ọ bụ iji nweta Mmụọ Nsọ gị, n'ihi na anyị niile bụ ndị mmehie. Ma, Ị na-agọzi ndị ogbenye na mmụọ. Ị nakweere mmehie nke Kraist; Ya mere, ana m efe Gi ma rịọ gị ka i jiri mmụọ nsọ gị tee m mmanụ ka e wee gbanwee m ma bụrụ onye dị umeala n'obi, dị ọcha, ebighebi, ebere, dị nsọ ma jupụta ịhụnanya dika Kraist. Amen.
Ị chọrọ ịmatakwu banyere Kraịst?
Anyị dị njikere iziga gị n'efu, mgbe ị rịọrọ gị, Oziọma Kraịst, na ntụgharị uche na ekpere. Naanị anyị na-arịọ gị ka ị gụọ Oziọma a ma kpee ekpere ka i wee nweta udo ebighị ebi nke Chineke.
Kesaa ozi ọma nke Kraist n'etiti ndị enyi gị
Ọ bụrụ na ị nweta ndụ ọhụrụ site n'aka Kraịst ma nata mmiri mmanụ ime mmụọ ya, nye ndị enyi gị akwụkwọ a. Anyị ga-adị njikere ịnye gị akwụkwọ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị kpebiri ikesa ha n'etiti ndị na-ekweghị ekwe ma kpee ekpere maka ndị ga-anabata ha. Anyị na-echere akwụkwọ ozigị. Echefula iche banyere adreesị gị zuru oke ka akwụkwọ ozi anyị wee ruo gị aka.
Page last modified on October 01, 2018, at 03:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)